Dallada Qurbajoogta Puntland ee Finland oo Abaalmarin Guddoonsiisay Yaasin Ali (Sawiro) – Radio Daljir
Dallada Qurbajoogta Puntland ee Finland oo Abaalmarin Guddoonsiisay Yaasin Ali (Sawiro)
Oktoobar 15, 2018 7:14 g 0
Yasin Ali Gass wuxuu ka mid yahay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Finland. Yasin waa dadkii ugu horeeyey ee soo gala wadankan Finland bilowgii 90:maadkii.
Sida caadiga ah bulshadda dhexdeeda waxaa jira dad mar walba ka dhexmuuqda oo wanaag iyo ixtiraam bulshadu u hayso. haddaba Yasin Ali Gaas wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka lagu tiriyo inuu leeyahay tilmaantaas aan kor ku soo sheegnay oo ay u dheer tahay Dulqaad, hawlkarnimo, soomaalinimo iyo Akhlaaq waaag.
Waxyaabaha aad logu amaano waxaa ka mid ah inuu yahay shaqsi cid walba la jaan qaadi kara, gacan furan, soomaalinimaduna ku weyn tahay.
Yasin wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii Dalladda Qurbajoogta Puntland ee wadanka Finland iyo Dalladda Puntland ee Yurub PEDAN.
Hawlkarnimada iyo daacadnimadda waxay horseeday inay ku soo xirmaan Dalladda tiro aad u badan oo ka mid ah bulshadda Somaaliyeed gaar ahaan bulshadda reer Puntland.
Yasin wuxuu lug weyn ku lahaa horumarka iyo shacbiyadda Dalladda, dad badanina waxay aaminsan yihiin inuu ahaa shaqsiga isbaray dalladda iyo Shacabka Soomaaliyeed isagoo adeegsanaya xirfadiisa shaqo iyo wanaaga uu bulshadda dhexdeeda ku leeyahay.
Haddaba maanta oo ay taariikhdu tahay 14.10.2018 waxay dalladda qurbajoogata Puntland ee wadanka Finland ku aabalmarisay YASIN ALI GASS shahaado sharafeed iyo haddiyad qaali ah anagoo uga mahadcelinayna hawlkarnimadaas iyo wadashaqaynta hufan ee uu Yasin muujiyey.
Waxaan leenahay haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed iyo dalladda Pudan:ba ee wadanka Finland intaas iyo in ka badanba waad naga istaahishaa, ilaahayna ajar iyo xasanaad ha kaa siiyo wanaagaaga iyo hawlkarnimadaada,. Aamin.
Xaflada qado sharafta ee loo sameeyey Yasin waxaa kasoo qaybgalay hormuudka jaaliyad Puntland ee Finland aqoonyahano sumcad weyn ku leh jaaliyada Somaaliyeed ee Finland iyo Xubin ka mid ah Golaha deegaanka magaalada Helsinki ee wadanka Finland.
Wacaal Daray ah: Sacuudiga oo mar dhow qiraya in Jamaal Khashoggi la dilay
Caawa & Daljir iyo Maxamed Lakiman, Daljir Boosaaso (dhegayso/daawo)